Ungayixelela njani iMac ukuba ifunde isicatshulwa | Ndisuka mac
Ewe, iMac yethu inemisebenzi eluncedo kakhulu, kodwa asiyisebenzisi kuba akukho mntu usixelele indlela yokuyisebenzisa kule mihla yethu. Kwivenkile yeApple, sinokufumana izifundo zokwenza ngcono imisebenzi yethu yemihla ngemihla, kodwa umsebenzisi ngamnye uneemfuno ezithile kwaye, ngoku akukho zifundo ezithile zomsebenzisi ngamnye kwiMac.Omnye wale misebenzi kukucela iMac ukuba yenze ukufundwa kwescreen, ngelixa sithatha ithuba lokufunda imeyile, jonga ispredishithi okanye nawuphi na omnye umsebenzi. Lo msebenzi ukhubazekile ngokungagqibekanga. Ngoku siza kuchaza ukuba ungayifumana phi kwaye isebenza njani.
I-Apple yenze iinguqulelo ezikude zeli candelo Ukufikeleleka. Ekuqaleni yayijolise kubasebenzisi abanombono okanye iingxaki zokuva. Ukuba uphakathi kwabo, uyazi ukuba ndithetha ngantoni. Kodwa uninzi lwabasebenzisi abayisebenzisi kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto, abayazi into enokuba negalelo kuyo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufumana umsebenzi. Oku kufumaneka kuKhetho lweNkqubo. Ngoku kufuneka sikhangele okanye sichwetheze ukufikeleleka. Uya kuyifumana ngesangqa esiluhlaza kunye nomntu opeyintwe mhlophe. Nje ukuba ungene ngaphakathi, uya kubona imisebenzi eyahlukeneyo eyalelwe ziintsapho. Kufuneka sifumane Uyathetha kwicala lasekhohlo lebhokisi yethu yokukhetha. Nje ukuba ucofe iNtetho, imenu esezantsi ivula ngasekunene ngemisebenzi eyahlukeneyo. Ukwenza kusebenze ukubizela, kufuneka sicinezele ukhetho:
Dlala isicatshulwa esikhethiweyo ngomlomo ngokucinezela iqhosha
Ngokuzenzekelayo, indlela emfutshane ekhethiweyo yile: ukhetho + ukubaleka, kodwa ucofa Tshintsha isitshixo ... Siza kuguqula indlela emfutshane emiselweyo. Kwimeko apho, iwindow entsha iyavela, apho siza kucinezela indlela emfutshane yezitshixo kwikhibhodi yethu kwizinto esizithandayo kwaye ucinezele ukwamkela.
Ngoku kufuneka sikhethe ilizwi kuphela esifuna ukusifundela lona. Kuya kufuneka sijonge phezulu kwimenyu esezantsi uyathetha. Apho sifumana ilizwi lenkqubo, kwimeko yam uMonica kwaye ukuba sicofa indawo eyehlayo, sitshintsha ukuthanda kwethu.
Okokugqibela, yenza uvavanyo: khetha isicatshulwa kwaye ucinezele indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yenziwe kwaye uya kuyibona indlela odlala ngokutyibilikayo ngayo loo myalezo ngokuvakalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Uyixelela njani iMac ukuba ifunde isicatshulwa
I-Apple ithumela izimemo kwi-WWDC 2017 ephambili